Toulouse. Heanoi misangano inotevera inorongwa mberi sarudzo dzeEurope - TELES RELAY
HOME » mwe Toulouse. Heino misangano inotevera inorongwa mberi kwekusarudza kweEurope
Toulouse. Heino misangano inotevera inorongwa mberi kwekusarudza kweEurope
Zvisarudzo zveEurope, zvakagadzirirwa Svondo 26 May 2019, dzinoswedera pedyo. Misangano inoverengeka ichaitirwa muTououse kusati kwaitwa sarudzo iyi. The details.
Yakatumirwa pa 17 May 19 ku 15: 35
Marlène Schiappa, Munyori weHurumende yekuenzana pakati pevakadzi nevakadzi uye kurwisana nekusarura, iri muTououse, Chishanu 17 May 2019. (© Archives / actu.fr)
Zvisarudzo zveEurope, izvo zvichazotongwa musi weSvondo 26 May 2019, zviri kuswedera nokukurumidza. Kubva kutanga kwemushandirapamwe, mazita akawanda misoro akaita misangano pa Toulouse kana munharaunda.
Vachiita zvematongerwo enyika kana kuti nyore nyore kuziva kuti vaite maonero vasati vasvitsa vhoti mubhokisi rekuvhoona vakaona Ian Brossat (French Communist Party), Nicolas Dupont-Aignan (Imire France), François-Xavier Bellamy (Republican), Jordan Bardella (Kuungana kweNyika), Yannick Jadot (Europe Ecology-The Greens), Raphael Glucksmann (PS-Nzvimbo Yomusangano), Benoît Hamon (Génération.s) François Asselineau (UPR) kana Jean-Christophe Lagarde (IDU).
Manon Aubry ... uye Jean-Luc Mélenchon paHalle aux Grains
Pamusoro pezita racho, tinoona kuuya kwe Manon Aubry yeFrance Insoumise, Chipiri 21 May kuHalle aux Grains, iyo ichaendeswa nemutevedzeri weBouches-du-Rhône Jean-Luc Mélenchonasiwo Toulouse Manuel Bompardnhamba 2 panyorwa kuEurope.
Verenga zvakare: European 2019. Heano vanyori vanobva kuToumouse avo vari kuda kumira muParamende
No Nathalie Loiseau in Toulouse ...
Kune rimwe divi, vamwe vatungamiri vematongerwo avo havana kuisa Toulouse semusangano wekugadzirisa mune zvavanoda. Asi vamiririri vavo vachave vari muGuta rePinese kuti vaite nharo pamusoro pemashoko aya. Kutanga, "Renaissance"runyorwa rwakatorwa Nathalie Loiseau muzita reRepublic muna March, uye zvigaro-ku-elbow muhurukuro pamwe neNational Gathering.
Uyo aimbova nhengo yehurumende, uyo aivewo nemubati weModem François Bayrou muguta rake Pau (Pyrénées-Atlantiques)Chishanu 17 May, haasi kuzobata musangano, asi ichamiririrwa nhengo dzehurumende, Mugovera 18 May 2019, paVanel Space yeMalongo Arch kubva ku14h. Emmanuelle WargonMunyori wenyika yeEcological Transition, uye Julien Denormandie, Mutungamiri weGuta neImba, vachava vatungamiri vehurumende.
Chishanu I17 inogona, pa 19h muimba Rancy, iri Marlene SchiappaMunyori weHurumende ari mutoro wekuenzana pakati pevarume nevakadzi, avo vachava izwi ra Nathalie Loiseau. Vatungamiri veHaut-Garonne vaigona kuunza imwe nhengo yehurumende mazuva mashomanana vasati vasarudzwa musangano mukuru wevanhu.
... kana Nathalie Arthaud
Chishanu I17 May, Sénéchal mukamuri pa20h, Jean-Pierre Mercierchechipiri pane yakanyorwa Lutte Ouvrière uye mutauriri we "vashandi 'sangano", ichamirira Nathalie Arthaud. Mumwe munhu asingazivikanwi kuvanhu vose sezvo Jean-Pierre Mercier aigara achidzivirira paTV inotarisa chikonzero chevashandi vePSA-Peugeot-Citroen, iyo iyo iri pakati pemumiririri wehurumende yeCGT.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-voici-prochains-meetings-prevus-avant-elections-europeennes_23823291.html
Urongwa hutsva hunopomera kupa mwana foni kuti awane zvinonyadzisira - xnxx
Kate ndiye feverish! Anoda kwazvo kuva ne # 4 mwana, hanzvadzi yaCharlotte, asi William anoramba